Duqaynta Qaza oo si ku meel gaar ah loo joojiyo waa xal qabya ah - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Iskahorimaadkii ka dambeeyey markii ay Xamaas la wareegtey Awoodda Qaza bishii Juunyo 2007dii iyo iskahorimaadka socda ee u dhaxeeya Israa’iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay keeneen dhimasho iyo dhaawac badan. Dadka reer Falastiin ayaa dhibaato xun oo jireed iyo mid maskaxeedba ay soo gaarteen, laakiin lama heleyn adeegyo dad ku filan oo kuwa ka dambeeya qalliinka ah sida fisiyoterabi iyo daryeelka daaweynta nafsaaniga ah (phychological). MSF ayaa ka shaqeyneysa in ay wax ka qabato arrinta iyada oo isku dayeysa in ay la qabsato xaaladda aan degganeyn ee Dhulalka Falastiiniyiinta.
Bishii Juunyo 2007dii, iskudhacyo falastiiniyiinta dhex marey oo ka dhacay Qaza ayaa Maamulka Falastiiniyiintu ugu kala jabey dowladda Fatax ee xarunteedu tahay Raamallaah iyo dowladda Xamaas ee ka dhisan Qaza. Iskadhacyo dhexdooda ah ayaa sii socda, kuwaas oo ay dad ku dhimanayaan.
Iskahorimaadka Israa’iiliyiinta iyo Falastiiniyiintana ayaa isna socda. Iyaga oo ka jawaabaya weeraro gantaallo oo lagu qaadey Israa’iil, ayaa ciidamada Israa’iil ay qaadeen weerar ballaaran 27kii Disembar, 2008dii. ‘Cast Lead’ oo loogu magacdarey weerarka ayaa waxaa uu ku bilowdey weeraro cirka ah iyo duqeymo kale, kuwaas oo waddada u xaarey weerar dhulka ah oo bilowdey 3dii Jannaayo 2009kii. Weerarkaa oo labaatan iyo laba maalmood socdey waxaa ku dhaawacmey 5,300, iyo ku dhowaad 1,300 qof oo Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan 300 oo carruur ah, ayaana ku dhintey.
Si ay wax uga qabato dhibaatada weerarka Israa’iil, ayaa MSF waxa ay taageertey cusbitaalka Qaza iyada oo ugu deeqdey qalab iyo daawo. Duqeyntii xoogganeyd iyo nabadgelyo-xumada, ayaa waxqabadyada degdegga ahi ay koobnaayeen, in kasta oo xarunta MSF ee daryeelka ka dambeeya qalliinka ee Qaza ay furneyd, haddana bukaanno kooban ayaa awood u yeeshey in ay xarunta soo gaaraan.
18kii Jannaayo, ayaa ciidamada Israa’iil ay ku dhawaaqeen xabad-joojin. Koox qalliinka qaabilsan iyo 21 tan oo qalab ah (oo ay ku jiraan laba cusbitaal oo la buufin karo) ayaa awood u yeeshey in ay galaan Magaalada Qaza. Maalmihii ka dambeeyey, ayaa MSF ay furtey xarun qalliinka degdegga ah si ay u daryeesho dadka dhaawaca ah ee ku soo qulqulayey ee u baahnaa qalliinno. Intii u dhaxaysay Jannaayo iyo Luulyo, oo uu barnaamijkan soo gabagaboobey, in ka badan 500 oo qalliin ayaa la sameeyey.
Daryeelka nafsaaniga ah ayaa sidoo kale la xoojiyey, iyada oo si gaar ah diiradda loo saarey kobcinta shaqaalaha degaanka ee xaaladaha degdegga ah sida shaqaalaha dhooliyada (ambalaasyada), oo si weyn u dhabar adeygey intii uu socdey dagaalka.
Barnaamijyada Qaza laga fuliyey dagaalka dabadii
MSF waxa ay daryeelka ka dambeeya qalliinka iyo mid fisiyoterabi ay dhaawacyada dagaalka ku siineysey xarumaheeda caafimaadka iyo kuwa kooxaha wareega. In ka badan 120 bukaan ayaa weli lagu daryeelayaa barnaamijkan. Barnaamij micro-biology (cilmiga noolayaasha yaryar) ah ayaa sidoo kale la sameeyey si loo wanaajiyo daryeelka caabuqa dhaawacyada iyo si cilmi-baaris loogu sameeyo sida caabuq-dhaliyeyaashu ay ugu adkeystaan daawooyinka caabuq-bi’iyeyaashu (resistance to antibiotics). Sanadkii 2009kii, in ka badan 1,900 qof ayaa la daweeyey: kuwaas oo tiroba saddex jeer ka badan tii 2008dii).
Sanadkii 2009kii, adeegyada caafimaadka carruurta ee degaanka ee la wanaajiyey iyo shaqaalaha gargaarka oo cusub oo yimid ayaa gacan ka geystey in la xoojiyo cusbitaalka keliya ee ku takhasususey cudurrada carruurta ee ka jira Marinka Qaza. Laga soo bilaabo bishii Jannaayo ilaa bishii Sebtembar markii barnaamijka la soo gabagabeeyey, ayaa waxaa la qaabiley in ka badan 9,000 oo carruur ay da’doodu ka yar tahay 12 sano jir.
Raadka nafsaaniga ah ee weerarka Israa’iil ay qaaddey bishii Jannaayo ayaa ahaa mid aad u ballaaran, gaar ahaan tan uu ku reebey carruurta. Shaqaale dheeri ah oo MSF u shaqeeya ayaa la keeney si ay gacan uga geystaan wax ka qabashada bukaannada cusbitaalka ku soo qulqulayey. Bukaanno cusub ooo ka badan 400, oo in ka badan kalabar ay ka yaraayeen 12 sano jir, ayaa la siiyey taageero nafsaaniga ah.
Magaalada Nablus, ayaa MSF ay ka waddaa barnaamij wax loogu qabanayo dadka qaadey qulubka la xiriira iskahorimaadka. Sanadkii 2009kii, in ka badan 300 bukaanno cusub ah ayaa heley daaweyn nafsaani ah, waxaana dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee MSF ay sameeyeen 2,100 la-talin.
MSF waxa ay sidoo kale ka shaqeyneysaa koonfurta Daanta Galbeed, iyada oo ka wadda barnaamij nafsaani-bulsho ah oo ay siineyso dhibanayaasha ku waxyeelloobey rabshadda socota.
MSF waxa ay Dhulalka Falastiiniyiinta ka shaqeyneysey ilaa 1989kii.
Tags: colaad, Dhaawcyo, duqayn, Falsdiin, qaza